पहाडी र हिमाली पदयात्रामा पर्यटकको चासो, कहिले खुल्ने उडान प्रतिबन्ध ? – Mission Khabar
पहाडी र हिमाली पदयात्रामा पर्यटकको चासो, कहिले खुल्ने उडान प्रतिबन्ध ?
मिसन खबर १८ असार २०७७, बिहीबार १२:३९
काठमाडौं । नेपालको पदयात्रा र पर्वतारोहणमा विदेशी पर्यटकले चासो देखाउन थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल चीन र युरोपका केही देशका पर्यटकले नेपालको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्न थालेका हुन् । खासगरी घनाबस्ती नभएका पहाडी र हिमाली पदयात्रा मार्गको अवस्थाबारे उनीहरुले सोधखोज गरेका छन् ।
होटेल संघ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार दक्षिण एसियामा नेपालप्रति पर्यटकको बढी चासो देखिएको छ । लामो समय घरमा बस्नुपर्दा दिक्क भएका विदेशीहरूले नेपालको स्वच्छ, शान्त र एकान्त ठाउँहरू सम्झदै आउने इच्छा जाहेर गर्न थालेका छन् । कोरोना महामारी विश्वव्यापी बनेपछि विश्वका शतप्रतिशत पर्यटक गन्तव्य बन्द भएपनि अहिले कोरोना नियन्त्रण गरेका र नियन्त्रणभित्रै राख्न सफल केही मुलुकले विदेशी यात्रुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन थालेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटीओ)का अनुसार संसारका ४८ देशले विदेशी पर्यटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएका छन् । यीमध्ये अधिकांश युरोपेली मुलुक छन् । नेपाल भने पर्यटक आगमनमा कडा प्रतिबन्ध कायम राखेको मुलुकको सूचीमै छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीह पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार देखिएका छन् । बोर्डले विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले तोकेको मापदण्डका आधारमा सुरक्षा निर्देशिका बनाएको छ । यो निर्देशिका पालना गर्दैै होटेल, पर्यटक यातायात, ट्राभल टुर तथा साहसिक गन्तव्य सुरु गर्नेगरि तयारी थालेपनि कहिलेबाट खोल्ने निश्चित भैसकेको छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न नसकेको सय दिन बढी भएको छ ।
गत बिहीबार बुद्ध एयरले उडान सुरु भएपछि अपनाउनुपर्ने सुरक्षा विधिबारे ‘डेमो’ उडान गरेर यात्रुले भोलि जहाज चढ्दा असुरक्षित महसुस नगरून्, गुणस्तरीय सेवाका लागि कर्मचारी तयार होऊन् र सेवा सुरु गर्न तयार छौं भन्ने सन्देश दियो तर नियामक निकायहरू कागजी तयारीमा सीमित देखिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउन गम्भिर नदेखिएको आरोप व्यवसायीको छ ।